Usizi kumfundi ongezukubhala umatric – Bayede News
Kuleli sonto kwelaboHlanga
Njengoba izinkumbi zabafundi bakamatekuletsheni kuzwelonke ziqale
by Bayede News Posted on 18 October 2019 24 October 2019
Njengoba izinkumbi zabafundi bakamatekuletsheni kuzwelonke ziqale kuleli sonto ukubhala izivivinyo zokuphela konyaka, umndeni wakwa- Anene kawazi uzothathani uhlanganise nani nokuthi iyakuzala nkomoni ngendodakazi yawo obekulindeleke ukuba nayo ibhale.
Uzekela elaboHlanga ngokuwehlele lo mndeni uthi indodakazi yawo, uSthandwa oneminyaka eli-17 ubudala ofunda utshelwe ngomzuzu wokugcina ukuthi yena nabanye abafundi ngeke besakwazi ukubhala izivivinyo zabo ngenxa yokuthi isikole sabo i-Eagle Christian Academy esisenkabeni yeGoli asibhalisile ngokusemthethweni. USthandwa ohlala eRandburg nomndeni bakhala ngabaphathi balesi sikole.
Unina kaSthandwa uNkk u-Abibi Anene utshele elaboHlanga ukuthi uMnu uSylvester Apollo ongumnikazi walesi sikole ongowokudabuka eNigeria ulicekele phansi ikusasa lengane yakhe.
“U-Apollo uthathe abanye abafundi wayobabhalisa esikoleni okungesomngani wakhe ngoba ethi sona sibhaliswe ngokusemthethweni. Okungiphatha kabi ushiye ngaphandle ingane yami kanye nabanye abafundi kulaba abayise kulesi sikole somngani. Uma simbuza ukuthi zisale kanjani ezethu izingane uthi isizathu ukuthi sigcwele manje sidinga kuphela inani elincane labafundi abavela ngaphandle,” kusho uNkk u-Anene.
Uqhube wathi: “Uma simbhokela njengabazali useyashintsha usethi ezethu izingane zishiywe ngaphandle ngoba azihlakaniphile kanti kulesi sikole somngani wakhe kudingakala kuphela izingane eziyiziqengqe ngoba uthishomkhulu wakhona ufuna isikole sakhe sithole amaphesenti ali-100 uma sekukhishwa imiphumela,”
UNkk u-Anene uthi kumanje kujame ingqondo akazi uzothathani ahlananise nani ukusiza ingane yakhe njengoba naseMnyangweni Wezemfundo eGoli behudula izinyawo ekungeneleleni.
“U-Apollo ulicekele phansi ikusasa lezingane zethu. Kumanje usitshela ukuthi akukho asengakwenza ukuzitakula kulesi simo kungcono zibuye ngonyaka ozayo zizoqala phansi ngoba ngeke esazikhokhisa imali egcwele”.
Nendodadakazi yakhe uSthandwa uhambe emagameni kanina wathi kumele u-Apollo athathelwe izinyathelo ngokucekela phansi ikusasa labo.
“Bese sizilungiselele ukuba sibhale izivivinyo zethu zokuphela konyaka ukuze sifeze amaphupho ethu okuya enyuvesi kodwa konke sikubona sekushabalele ngenxa yalo muntu waseNigeria ozocekela phansi ikusasa lezingane zaseNingizimu Afrika. Okubuhlungu uMnyango Wezemfundo eGauteng awufuni ukungenelela,” kusho uSthandwa.
Uqhube wathi: “Ngenxa yokhwantalala lokungayi esikoleni sengike ngazama nokuzibulala ngoba ngikhalela isikhathi sami esichitheke ngifundela ubala.”
Ugxeka noMnyango Wezemfundo ngokungabavikeli kulabo heshane abavule oqhibukhowe bezikole ezingombombayi.
“Ngiyazibuza ukuthi uHulumeni wethu ubavumela kanjani abantu bokufika ukuba bazocekela phansi ikusasa lezingane zakuleli lizwe ngalezi zikole zabo ezingombombayi. Kungani laba bantu bengaboshwa noma babuyiselwe emazweni abo ngoba lezi zikole ziyaziwa. Laba bantu basigxisha nangezidakamizwa kodwa uHulumeni uthule akasivikeli. Bheka nje nathi lo mlisa waseNigeria usesiphendule amaphara njengoba sijika nelanga emakhaya,” kuqhuba yena.
ElaboHlanga linekhophi yencwadi ebhalwe nguNkk u-Anene enxusa izikhulu zoMnyango Wezemfundo ukuba zingenelele kulolu daba.
UMnyango Wezemfundo ngemuva kokuthunyelelwa ngelaboHlanga uhlu lwemibuzo ngesonto eledlule mayelana nalolu daba nezinsolo zokuthi kuthiwa uhudula izinyawo ekuphenyeni ngodaba lwesikole i-Eagle Christian Academy School ngoba umnikazi waso azana nabathile eMnyangweni, ugcine uthe udaba uzolulandela. UMnyango uze wathumelela elaboHlanga ngisho neReference Number ethi FLSTU3819 ukuqinisekisa ukuthi udaba bayalulandela kodwa kuze kwaphela isonto bengabuyi nezimpendulo obuzethembise ngesonto eledlule. Enye yezingane ezisohlwini lwabafundi asebejika nelanga noSthandwa nguNks uDylan Phakathi.
“Kuningi obekusolisa ngalesi sikole njengoba kumariphothi ethu esigamu sonyaka kuqhanyukwe sesigixabezwe ngamamaki olwimi lwesiZulu ekubeni singakaze sisifunde,” kuqhuba uSthandwa.
Uqhuba uthi: “Kuke kwasuka omkhulu umsindo esikoleni saxabana nothisha ngenxa yokuthi baqhamuka sebethi ngalelo langa sizobhala izivivinyo ekubeni sasingazilungiselele. Sasingenalwazi ukuthi sizofika esikoleni ngalelo langa kuthiwe azishe kubhalwa izivivinyo zesigamu sonyaka. Bagcina sebesincenga bethi asisale sesivuma ukubhala senzele uthishomkhulu bazosipha amamaki,” kusaqhuba uSthandwa.
Unina kaSthandwa uthi aboMnyango Wezemfundo kade bazi ukuthi lesi sikole asibhalisile ngokusemthethweni ngoba ngomuye unyaka wake wasuka umsindo ngaso kodwa kwabuye kwathiwa konke sekuqondile njengoba uMnyango umvumele waqhubeka naso.
“Nathi ngesikhathi sizobhalisa izingane zethu kusona sambuza, u-Apollo ukuthi ngabe usesibhalisile yini isikole sakhe yena wasiqinisekisa ngokuthi ngempela usesibhalisile nokuthi yingakho uMnyango Wezemfundo umvumele waqhubeka naso. Manje sesiyaxakeka ukuthi sekuvelaphi ukuthi asibhalisile ngokusemthethweni,” kuqhuba uNkk u-Anene.
USthandwa uthi ekuqaleni u-Apollo ubethi akambhalisile ngoba ukweleta imali yesikole obekuyimali yezinyanga ezimbili.
“Kodwa kuthe abazali bami sebeyikhokhile le mali yesikole wajika esethi akangibhalisile ngoba bengingenzi kahle ezifundweni zami. Kungixakule lokho ngoba mina ngizazi ngihlakaniphile esikoleni futhi kuyimi iHead Prefect okuyisikhundla ongasinikezwa uma ungenzi kahle esikoleni,” kuqhuba uSthandwa. Uqhuba uthi: “U-Apollo uphinde wathi angincenge abazali bami ngoba banemali ukuba bayogwazela izikhulu zoMnyango Wezemfundo ukuze ngivunyelwe ukubhala. Kubuhlungu ukuhlala ekhaya ekubeni besengizilungiselele ukubhala lezi zivivinyo.”
Posted in Kuleli sonto kwelaboHlanga